Obere Nduzi Nduzi na Social Media Mastery | Martech Zone
Fraịde, Ọgọstụ 30, 2013 Douglas Karr
Ekwenyeghi m na ahia obula di njikere itinye ego na usoro mgbasa ozi. E nwere ụlọ ọrụ dịka Apple nwere ụdị dị egwu, mgbasa ozi mara mma, yana nnukwu ngwaahịa na-eme ka ahịa site na ndị ọrụ ha. Apple ekwesịghị ịdị na-arụ ọrụ na mgbasa ozi mmekọrịta iji lanarị ma nwee ihe ịga nke ọma. Otherlọ ọrụ ndị ọzọ dị na njedebe nke ọnụ ọgụgụ ahụ, yana ọrụ ndị ahịa na nsogbu ndị ahịa nwere. Izere mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwere ike ịbụ ezigbo atụmatụ ruo mgbe ha nwere ike idozi usoro na ngwaahịa ha.
Mana, maka ụlọ ọrụ na-achọ ijide òkè ahịa, wulite ikike, mepụta mmetụta ma bulie azụmaahịa ha, mgbasa ozi mmekọrịta bụ ọnụ ala, nnukwu mgbalị iji mee ya. M na-ekwu elu gbalịsie ike n'ihi na ọ chọrọ oge na nraranye n'aka gị na ndị otu gị iji mepụta ọdịnaya ma nye uru iji bulie ndị na-ege gị ntị wee wuo obodo. Nke a bụ eziokwu karịsịa banyere obere azụmaahịa na-enweghị ego iji 'zụta' mgbasa ozi dị mkpa iji too.
Mgbasa mgbasa ozi aghọwo ihe dị mkpa maka atụmatụ ịzụ ahịa obere obere! Ajuju ajuju bu: “olee otu ahia gi gha esi nweta ahia ahia ahia?”. Chọpụta n’ime obere azụmaahịa ahụ na - enyere aka na Social Media Mastery, ozi ọhụụ ọhụrụ ewetara gị AhịaMeSuite na Plaster!